गुरुङ फिल्म अब नियमित रुपमा चलचित्र हलमा प्रदर्शन गरिने (कुन फिल्म कहिले प्रदर्शन हुँदैछ ?) – NepalayaNews.com
गुरुङ फिल्म अब नियमित रुपमा चलचित्र हलमा प्रदर्शन गरिने (कुन फिल्म कहिले प्रदर्शन हुँदैछ ?)
११ माघ २०७७, आईतवार १४:५३
गुरुङ फिल्म अब नियमित रुपमा चलचित्र हलमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । आइतबार चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा गुरुङ फिल्म एशोसियशन नेपालका अध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङले गुरुङ फिल्म माघ २३ गतेबाट नियमित रुपमा सिनेमा हलमा प्रदर्शन गरिने जानकारी गराए ।
गुरुङ चलचित्र निर्माण भएको २५ वर्ष पुग्दाको खुशियालीमा आफूहरु अब गुरुङ समुदायमा मात्रै सिमित नरही सिनेमा हल मार्फत आम समुदायमा फैलिने सोचका साथ अगाडि बढेको उनले बताए । भोजबहादुर गुरुङले भने,“२५ वर्षको लामो यात्रा तय गर्दा पनि गुरुङ चलचित्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । हामीलाई लाग्यो गुरुङ चलचित्र अब समुदायमा मात्रै सिमित रहनुहुँदैन । त्यसैले माघ २३ गतेदेखि नियमित रुपमा शुक्रबार र शनिबार पोखराको मिडटाउन ग्यालरीयामा चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ ।”
माओत्से फिल्मस् प्रालि ब्यानरमा माओत्से गुरुङले निर्देशन गरेको चलचित्र “मनको बाबरी” जेठ ७ र ८ गते प्रदर्शन गरिने भएको छ । जिफानले दिएको समय तालिका अनुसार चलचित्र “फुङ” जेठ १४ र १५ गते प्रदर्शन गरिनेछ । जसलाई बेब्स क्रियेशन प्रालिको ब्यानरमा प्रितम गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्र “ङोल्स्यो माया” जेठ २१ र २२ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ । शुभेच्छा फिल्म प्रालिको ब्यानरमा बनेको चलचित्रलाई खुश बहादुर गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । मुनाल फिल्मस् प्रालिले निर्माण गरेको चलचित्र “मैरीमु” जेठ २८ र २९ गते प्रदर्शन हुनेछ । जसलाई भोज बहादुर गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । हङ्ग्री आई फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको र नौ जङ्ग गुरुङद्वारा निर्देशित चलचित्र “तिमी नभए” असार ४ र ५ गते प्रदर्शन गरिने भएको छ । प्रदर्शन गरिने सबै चलचित्रको समय मध्यान्ह १२ बजेदेखि २ बजेसम्मलाई तोकिएको छ । टिकटदर भने मिडटाउनले यसअघि अन्य चलचित्र प्रदर्शनमा लिँदै आएको कायम रहने जानकारी गराइएको छ ।
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर ११ माघ २०७७, आईतवार १४:५३
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री ११ माघ २०७७, आईतवार १४:५३
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका ११ माघ २०७७, आईतवार १४:५३